စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ပါ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ LaCie DJI Copilot USB 3.1 Boss External Hard Drive 2TB ~ The ICT.com.mm Blog
စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ပါ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ LaCie DJI Copilot USB 3.1 Boss External Hard Drive 2TB
Laptop Free. Carefree လို့ ကြွေးကြော်ထားတဲ့ External HDD ပါ။ ဒီ External HDD ကို သုံးဖို့ လက်တော့ရှိမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖုန်းတစ်လုံးရှိတာနဲ့တင် အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။ Drop & Dust Resistant ဖြစ်တာကြောင့် တခြား HDD တွေလို ပျက်မှာစိုးလို့ နုနုရွရွ သုံးနေစရာမလိုတဲ့ LaCie DJI Copilot USB 3.1 Boss External Hard Drive 2TB ဖြစ်ပါတယ်။
Works with iPad Pro တွေ ဖြစ်လို့ တကယ်ကို အသုံးပြုရအဆင်ပြေပါတယ်။
အခုဆိုရင်တော့ 29% discount ပေးထားလို့ မူရင်းစျေး K701,400 ကနေ အခု K498,000 တည်းနဲ့ ICT.com.mm မှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
Shop here: https://bit.ly/2VbkLiO
#LG #Monitor #GamingMonitor #2kMonitor #ShopICT #Myanmar
Newer Hey…..Have you gotanew laptop yet?
Older Lenovo All-in-one PCs with Free Gift